Blueberry uye almond cake | Bezzia
Blueberry uye almond cake
Maria vazquez | 28/11/2021 10:00 | Desserts
Iyi ndeimwe yemakeke emhando yepamusoro atati tambowana? PaBezzia isu tiri pachena kuti iyi blueberry uye almond cake iri akakodzera kuva pakati pevakanakisisa. Haisi chete ine fluffy uye inonaka crumb, asiwo ine crunchy crust pamusoro payo.
Hausi mumuromo here? KuBezzia hatingamborebesa mazino nechinhu chausingakwanise kutevedzera kumba. Iri keke pamusoro pekunaka ndiro a keke iri nyore kugadzira, yeavo mune izvo zvakakwana kuyera zvese zvinoshandiswa zvakanaka uye kutora mbiya uye ruoko musanganisi kuti uende.
Kana pane chimwe chinhu chakakosha pamusoro pekugadzirira keke iyi, ndiko kubika kwayo. Isu tinoshandiswa kutora makeke kuchoto uye kukanganwa mu 45-55 maminitsi. Apa zvakadaro, isu tichavhura ovheni kusvika kaviri. Kuti? Unozozviwana nhanho nhanho.
150 g. bota mukamuri tembiricha
190 g. cheshuga
2 mashupuni mandimu zest
1 tablespoon muto wemonamu
90 g. hupfu hwegorosi
1,5 mashupuni ehupfu hwekubheka
110 g. maarimondi epasi
200 g. bhuruu
Pisa ovheni kusvika 180ºC nefeni uye mutsara kana kuzora mold (21 × 11 cm.)
Sakanidza hupfu nembiriso uye chengetedza.
Mundiro huru kana chikafu chekudya rova bhotela nekumhanya kukuru neshuga, zest yeremoni, muto wemonamu uye vanilla essence, kusvikira musanganiswa wakachena uye wakajeka wawanikwa.
Pashure wedzera mazai rimwe nerimwe, kurova pamhepo yepakati mushure mekuwedzera kwega uye kubhadhara kuchenesa mativi emudziyo ne spatula.
Kana mazai asanganiswa, sanganisa hupfu nembiriso, muarumondi wevhu nemunyu muzvimedu zvitatu zvakatevedzana. Kana uchida, unogona kusanganisa izvi zvinongedzo zvisati zvaitika kuti uzviwedzere zvakagadzikana mumabheji matatu.
Kupedza wedzera 2/3 yeblueberries uye sangana ne spatula.
Dururira mukanyiwa muforoma zvawagadzira uende nazvo muchoto.
Mushure memaminitsi gumi nemashanu yakabikwa, vhura oveni wovanzire mokuzuvhisa mokuzuvhisa. Mushure memamwe maminetsi gumi nemashanu iyo nzvimbo inenge yatsvukisa, vhura ovheni uye isa aluminium foil pakeke kuitira kuti uso urege kutora rumwe ruvara kana kupisa.
Bika mamwe gumi maminetsi uye tarisa kuti yagadzirwa kuibvisa muchoto.
Paunenge wabuda, regai zvitonhore kwemaminitsi gumi kuisunungura paraki uye rega ipedze kutonhora.
Nakidzwa nekeke yeblueberry uye almond sponge nekofi inopisa kana kuti ice cream muzhizha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Desserts » Blueberry uye almond cake
Nzira yekugadzirisa sei kushungurudzika? Vanhu vakasimba mupfungwa vanokuudza